चीन Staniless स्टील पार्ट्स कारखाना र निर्माताओं | नेतृत्व
Staniless इस्पात पार्ट्स
यदि तपाईंसँग स्टेनलेस स्टीलका भागहरू छन् भने हामी एक सबैभन्दा सक्षम र किफायती स्रोत हौं। लाभहरू: वेल्डिंग गर्न सजिलो, राम्रो प्लास्टिकसिटी (तोड्न सजिलो छैन), विकृति, राम्रो स्थिरता (जंग गर्न सजिलो छैन), सजिलो Passivation।
यदि तपाईंसँग छ भने स्टेनलेस स्टील भागहरू मशीनिंग हामी सबै भन्दा सक्षम र सस्तो स्रोत हो।
कुन स्टेनलेस स्टीलका प्रकारहरू लोकप्रिय छन्?
Austenitic स्टेनलेस स्टील: २०० र series०० श्रृंखला संख्या द्वारा चिह्नित। यसको माइक्रोस्ट्रक्चर अस्टेनाइट हो। सामान्य प्रकारहरू निम्न हुन्:
1Cr18Ni9Ti （321） C 0Cr18Ni9 （302） 、 00Cr17Ni14M02 （316L)
लाभहरू: वेल्डिंग गर्न सजिलो, राम्रो प्लास्टिकसिटी (तोड्न सजिलो छैन), विकृति, राम्रो स्थिरता (जंग गर्न सजिलो छैन), सजिलो Passivation।
बेफाइदा: समाधानमा मध्यम प्रति संवेदनशील जुन क्लोराइड छ, तनाव क्षतिको खतरामा छ।
फेरेटिक स्टेनलेस स्टील: series०० श्रृंखला संख्या द्वारा चिह्नित। यसको आन्तरिक माइक्रोस्ट्रक्चर फेराइट हो, र यसको क्रोमियम द्रव्यमान अंश ११..5% ~ .0२.०% को दायरामा छ।
सामान्य प्रकारहरू निम्न हुन्:
लाभहरू: उच्च क्रोमियम सामग्री, राम्रो थर्मल चालकता, स्थिरता राम्रो हो, राम्रो तातो dissipation।
नुकसान: कमजोर यांत्रिक गुणहरू र प्रक्रिया प्रदर्शन।
मार्टेन्सिटिक स्टेनलेस स्टील: series०० श्रृंखला संख्या द्वारा चिह्नित। यसको माइक्रोस्ट्रक्चर मार्टेनाइट हो। यस प्रकारको इस्पातमा क्रोमियमको द्रव्य अंश ११.%% - १.0.०% हो।
फाइदा: उच्च कार्बन सामग्री, उच्च कठोरता।
बेफाइदा: गरीब प्लास्टिक र वेल्डिबिलिटी।
स्टेनलेस स्टील मुख्य रूपमा प्रयोगको लागि के अनुप्रयोग?
अनुकूलन स्टेनलेस स्टील पार्ट्स प्राय: प्रयोग गरिन्छ: कन्टेनर, ह्यान्डल, समुद्री भाग, इन्जिन पार्ट्स, खाना पकाउने भाँडा, मेडिकल उपकरण, अस्पताल उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण, दबावको ट्याks्की, फास्टनर, मोटर वाहन पार्ट्स, प्रेशर ट्याks्क, फास्टनर र वास्तु भागहरु)।
4०4 स्टेनलेस स्टीलबाट गुणस्तरको भागहरू बनाउने। हामी हाम्रो सीएनसी स्विस मेशिन र सीएनसी टर्निंग सेन्टरहरूमा जटिल भागहरू मेशिन गर्न सक्दछौं।
स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु 4० an एक अत्यन्त लोकप्रिय कम लागतको मिश्र धातु हो, जुन भागका लागि ढाँचा वा वेल्डिंग आवश्यक पर्दछ। यो उत्कृष्ट क्षरण, ऑक्सीकरण, र गर्मी प्रतिरोध छ र कुनै पनि स्टील मिश्र धातु को सबै भन्दा वेल्डेबल हो। 304 चुम्बकीय छैन।
4०4 सँग मेशिन लागत कारक ining.० छ जब स्टिल १२ एल १ to सँग तुलना गरिएको छ। यो वेल्डिंग को लागी उत्कृष्ट छ र कडा र ductile वेल्ड उत्पादन गर्दछ। 304 तातो उपचार को लागी प्रतिक्रिया गर्दैन, तर चिसो टेन्सिल शक्ति र कठोरता बढाउन को लागी काम गर्न सकिन्छ। फोर्जिंग र चिसो काम गरिसकेपछि एनलिंग सिफारिस गरिन्छ।
उद्योग र अनुप्रयोगहरू
Ts बोल्ट र नटहरू
Omot मोटर वाहन घटक
वूशी लीड प्रेसिजन मशिनरी धेरै फरक प्रक्रियाहरूको प्रयोग गरेर स्टेनलेस स्टीलको भागहरू निर्माण गर्दछ: मेशिन, मिलिंग, घुम्दै, ड्रिलिंग, लेजर काट्ने, EDM, मुद्रांकन, पाना धातु, कास्टिंग, फोर्जिंग, आदि।
अघिल्लो: ब्रास पार्ट्स
अर्को: एल्युमिनियम पार्ट्स